Akwụkwọ Lavon Temple na Martech Zone |
Edemede site na Vlọ Lavon
5 Point Email Holiday Holiday Nyocha
Monday, August 20, 2012 Saturday, October 25, 2014 Vlọ Lavon
Ọ bụ Fall nke pụtara ịlaghachi ụlọ ahịa na-aga n'ihu na ụmụ akwụkwọ na-alaghachi na klaasị. Otú ọ dị, Oge. Mara na n’agbanyeghi na obu onwa ogugu, otutu ndi mmadu amalitela ileba anya n’ime onyinye. Ọ bụrụ na ha chọta ya maka ọnụahịa kwesịrị ekwesị, ha na-aga n'ihu ma zụta iji gafere egwuregwu ahụ. Ọnọdụ ozi ịntanetị gị maka ndị na-ege ntị na nka na ozi ịntanetị iji jide ndị na-azụ ahịa ahụ. Nke
Marketingdị Ahịa Email: Iji Ihe Omume Pụrụ Iche na Usoro Isiokwu
Monday, July 23, 2012 Tọzdee, Nọvemba 22, 2012 Vlọ Lavon
Gburugburu inebọchị Valentine n'afọ a, achọpụtara m otu òtù dị iche iche na-eji obi na usoro isiokwu ha. (Dị ka ihe atụ dị n'okpuru) Kemgbe ahụ, ahụla m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amalite iji akara na akara isiokwu ha iji dọta uche onye na-agụ ya. Iji ihe odide pụrụ iche na akara isiokwu bụ otu n'ime usoro email kachasị ọhụrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agba ọsọ ugbu a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwebeghị,
3 Email Marketing Tools Need Kwesịrị Knowmara Banyere
Monday, June 11, 2012 Thursday, July 10, 2014 Vlọ Lavon
Ederede ịdenye aha - Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa email, ọ ga-abụrịrị na ha na onye ha na ha na-emekọrịta ihe nwere njikọ. Ederede ịdenye aha bụ nnukwu ngwa ahịa email. Ọ bụ aka pụọ ​​ịbịaru ndepụta email gị. Ndị na-ere ahịa email gị na-ewepụta oge iji setịpụ ihe a mgbe ị na-anọdụ ala na-ele ya ka ọ na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na ị gbalịsighị ike, ị ga-ahụ otú
Monday, May 14, 2012 Sunday, October 4, 2015 Vlọ Lavon
"Afọ kwa afọ, site na Machị 2011 ruo Machị 2012, email mepere na ngwaọrụ mkpanaka toro pasent 82.4," dịka ọnụọgụ ndekọ ekwentị Return. Ime mobile akụkụ nke ozi ịre ahịa email abụghịzi maka mgbasa ozi email dị elu; ọ bụ ihe dị mkpa. N'oge na-adịbeghị anya, Delivra bipụtara Otu esi eme ka Email gị Marketing Mobile Friendly, ihe enyemaka nke na-enye 2012 mkpanaka mkpanaka, ọnụ ọgụgụ, na nkwenye banyere otu esi edozi ahịa email gị maka ndị na-ege gị ntị na-aga. Akwụkwọ akụkọ ahụ na-atụle
Ọ bụ oge ahụ n’afọ ọzọ. Arebọchị dị ogologo ma ihu igwe dị mma. Ndị mmadụ na-ejikarị oge opupu ihe ubi eme ihe iji nwee ike ihicha ụlọ ha site na elu ruo na ala. Amaara m na emeelarị m ezigbo mmiri nke ụlọ obibi m. Ọ bụghị echiche ọjọọ ịtụgharị ịdị ọcha na mmemme ahịa email gị. Lee ụfọdụ mmiri ihicha ndụmọdụ: sikrob! Wepụta oge na-asachapụta ndepụta gị nke ọma. Chọta
Monday, April 2, 2012 Saturday, October 25, 2014 Vlọ Lavon
Dabere na 2012 MarketingSherpa Benchmark Survey, ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịbawanye mmefu ego email ha karịa 30% na 2012. Agbanyeghị, Delivra na-achọpụta na ọtụtụ ụlọ ọrụ ka na-agbaso otu usoro aghụghọ nke email - ndepụta ndepụta, ọdịnaya, mwekota , imewe, wdg Emela ka mmefu ego email gị na-enweghị uche doro anya na ihe kwesịrị imeziwanye na ihe na-adịghị. Wepụta oge lekwasị anya n'ihe ndị bụ isi; ọ bụ echiche ndị a bụ isi
Mọnde, Febụwarị 20, 2012 Wednesday, February 15, 2012 Vlọ Lavon
Tupu ịmalite ịchọpụta otu esi emepụta email nke nwere mmekọrịta ọ bụla, ị kwesịrị ịjụ onwe gị "Gịnị bụ ndị nnata gị iji lelee email gị?" ọ bụrụ n’ikpebie na enwere mkpa maka ozi email kachasị, yana oge eruola ịmalite ịtụle etu ị ga-esi mepụta ya. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji mepụta ozi ịntanetị-njikere maka mkpọsa email gị. 1. Usoro Usoro. Ekwentị mkpanaka na-agbadata usoro isiokwu email dị mkpụmkpụ na